कसरी थाहा पाउने प्रेमिकाको यौन चाहाना ? |Tapaiko Khabar
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : माघ २७, २०७५ जीवन शैली-यौन जिज्ञासा
सामान्य तथा मानिसको जीवन शैलीमा आउने परिवर्तनका विभिन्न कुरामा परिवर्तन आउने गर्दछन् । मानिसहरु प्रेममा शारीरिक सम्बन्धको कति महत्व हुन्छ ? यो आ–आफ्नो बुझाई र भोगाइमा निर्भर गर्ने कुरा हो । कतिले ठान्छन्, प्रेम शुद्ध प्रेम मात्र हुनुपर्छ । कतिले यसलाई रोमान्सको रुपमा लिन्छन् । प्रेमी पनि त कोही आदर्श हुन्छन्, कोही विन्दास । कोही संवेदनसिल हुन्छन्, कोही रोमान्टिक ।
मानिसहरु प्रेम सम्बन्धमा रहँदा स्नेह र प्रगाढता त हुनै पर्छ साथसाथै एकअर्कालाई बुझनु पनि जरुरी छ । प्रेमिकाद्वारा नयाँ कपडा पहिरिएर आएमा उनको प्रशंसा गर्नु, उनको सराहना गर्दै उनको हात चुम्ने जस्ता ससाना कुराहरु सम्बन्धमा मजबुतीको लागि धेरै जरुरी छ ।
यौनक्रिडा मात्र होइन रोमान्टिक माहौल बनाउनुस्
प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवतीहरुलाई आनन्ददायक सेक्स लाइफको लागि यौनसम्पर्क मात्रै होइन आफ्नो प्रेमीको साथमा बिताएको हरेक क्षणमा रोमान्टिक पलहरु र मायालु व्यवहारको पनि आवश्यकता हुन्छ ।
यौन कार्यका लागि प्रमिकाको पहिलो पूर्ण समर्पण
प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवाहरुले युवतीहरुको छालाको कोमलता, आँखाको सुन्दरता, ओठ, लामो कपाल, वक्ष, नितम्ब आदीको सुन्दरता र सेक्सुअल्ली अट्रयाक्सनको प्रशंसा गरेर प्रेमीकाको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
यौन सम्बन्धपछि पनि ध्यान दिनुपर्छ
यस भन्दा अगाडीदेउवाको पालो अब सकियो, नेतृत्व लिन तयार छु : गगन थापा
यस पछिबराबरीमा रोकियो बार्सिलोना